Thailandy · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Thailandy · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Thailandy tamin'ny Aogositra, 2018
Indonezia: Namely an'i Indonezia ny horohorontany, re hatrany Singapaoro sy Bangkok
Indonezia 29 Aogositra 2018
Horohorontany iray nahatratra 7.9 tamin'ny refy Richter no namely ny akaikin'ny Nosy Sumatra tany Indonezia. Nandefa fampitandremana ny mety hisian'ny tsunami ireo manampahefana ao Malezia, Indonezia ary Inde. Nibilaogy momba ireo horohorontany ren'izy ireo ny tany Azia Atsimo Atsinanana.
Fahalalahàna miteny 24 Aogositra 2018
Kambodza 21 Aogositra 2018
[...] vokatry ny fampanofàna tany kambodziana amin'i Vietnam mpifanila vodirindrina aminy mba hahafahany mampitombo ny velarantany fambolena ho an'ny sehatry ny indostriam-pambolena[...] Mampanahy an'i Yeap ny zavamisy sao hivadika ho titra filazana ny maha-tompon'ny tany ireo fifanarahana [...] endrika mampiavaka ny kolontsaina kambodziana ny vary
Ady & Fifandirana 19 Aogositra 2018
DoGooderTV: Nisokatra ny fifidianana ho an'ny lokan'ny lahatsary tsy mitady tombontsoa
Afrika Mainty 18 Aogositra 2018
Nifarana ny Asabotsy 25 Aprily 2009 ny fifantenana ireo mifaninana Loka DogooderTV 2009 NonProfit Video, ary azo nojerena tao amin'ny tranonkalany ireo lahatsary samihafa nalefan'ireo fikambanana mba hampiroboroboana ny lohahevitra. Hasehonay anao androany ny sasany tamin'ireo lahatsary nifaninana izay nifantoka tamin'ny olana iraisampirenena.
Thailandy : Nokaramaina Hanao Fihetsiketsehana Ve Ny Lobaka Mena?
Ady & Fifandirana 17 Aogositra 2018
Nihetsika nandritra ny herinandro telo ny Lobaka mena ; nangataka ny fialan'ny praiminisitra Abhisit Vejjajiva izay ampangain'izy ireo ho tonga eo amn'ny fitondràna tamin'ny fomba tsy ara-dalàna
Laos 14 Aogositra 2018